व्यवस्थापन सिक्नु छ भने माइक्रोबस चढ्नुहोस – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/व्यवस्थापन सिक्नु छ भने माइक्रोबस चढ्नुहोस
उदाहरणको लागि कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटोमा पुग्नुहोस् । त्यहाँ माइक्रोबस र ठूलाबसको लाइन हुन्छ ।‘जाने हो ? खाली छ ! बल्खु, कालीमाटी, रत्नपार्क…….।’
‘जाने हो ? बल्खु, कालीमाटी, रत्नपार्क…….।’ फेरि सुन्नुहुनेछ ‘गाडी पुरै खाली छ आउनुस् !’ तपाईं नयाँ यात्रु हो भने अचम्म लाग्न सक्छ । वरिपरि हेर्नुहुनेछ, बसमा त सबै सिट भरिएका छन् । तर पनि सहचालकले पुरै खाली भन्छ ?
‘जाने हो ? बल्खु, कालीमाटी, रत्नपार्क…….।’ ‘पुरै खाली छ’ फेरि आवाज आउनेछ ‘अलि भित्र भित्र सर्नुस्’ यो उभिएकाहरुको लागि सूचना हो । यदि तपाईं उभिएर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्न सक्ने जति सरिहाल्नुस् । किनकी अब तपाईंले सर्ने सीपको व्यवस्थापन पनि सिक्दै हुनुहुन्छ ।
बिष्णु मायालाई पढाउने जिम्मा फुर्वा दोर्जेले लिए